को*रोना भाइरस : मलेसियाको पछिल्लो अपडेट यस्तो छ । – Online Nepal
को*रोना भाइरस : मलेसियाको पछिल्लो अपडेट यस्तो छ ।
April 21, 2020 1129
काठमाडौं / कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन मलेसियाले लकडाउनकाे अवधि थपेकाे छ । अप्रिल २८ सम्म अब मलेसियामा ‘लकडाउन’ कायम गरिएको छ । यस अवधिमा नेपालीसहित कुनै पनि विदेशी नागरिक मलेसिया प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । यस अवधिका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरिएको छ भने खेलकुद, धार्मिक कार्यक्रम लगायत कुनै पनि किसिमका भेला गर्न रोक लगाइएको छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ५ हजार ४ सय २५ जना निको भएर घर फिरेकाहरु : ३२ सय ९५ जना । (एक जना नेपालीसहित) अस्पतालमा उपचाररत : २ हजार ४१ जना । मृतकको सङ्ख्या : ८९ जना ।
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सकेसम्म भिडभाडमा नजानुहोस् । कोरोना रोकथामका लागि मलेसियाले जारी गरेको लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । लकडाउनको अवज्ञा गर्ने नेपालीसहित मलेसियाका नागरिकसमेत पक्राउ परेको भन्दै कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कता अपनाउन दूतावासले सबै नेपालीलाई आग्रह गरेको छ ।
सुरक्षा सतर्कताका लागि सरकारको निर्देशन र सल्लाहबारे बेला बेलामा जानकारी लिनुहुोस् । कुनै समस्या परेमा मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासमा ६०३२०२०१८९९ र ६०२०२०१८९८ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । मलेसियामा नेपालीका लागि काम गर्ने धेरै सङ्घसंस्था छन् । समस्या पर्दा यस्ता सङ्घसंस्थाको पनि सहयोग लिन सकिन्छ ।
लकडाउनको अवधि सकिएपछि मलेसिया सरकारले कोरोनाको कारण भिसा सकिंदा पनि घर फर्कन नपाएकाहरुका सन्दर्भमा उचित व्यवस्था गर्ने मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताउनुभएकाे छ ।
Prev५ दिन देखि भोकै बसेको परिवारलाई राहत लिएर जादा चल्यो रुवाबासी,गायिका बिमा कुमारी दुरा भाबुक भईन (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextलकडाउनकाे बेला सुत्केरी छाेडेर भागे श्रीमान, सकसकाे बेला साहारा पाईन्, कति राम्री छाेरी हेर्नुहाेस भिडियो
७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला ..!
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61882)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27804)